आफ्नै संगठनको विरुद्धमा दूषित हावा नफैलाऔं - NepaliEkta
संगठन गर्न, राजनीति गर्न कसैले कसैलाई रोको र बाँधेको हुँदैन । प्रत्येक ब्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ । बाँध्ने भनेको बिचारले हो । शाङ्गलाले बाँध्ने होईन । आउनेलाई स्वागत छ जानेलाई पनि ढोका खुल्लैछ । तर संगठनको अनुशासन बिपरित काम गरेर हामी संगठनका हौँ भन्दै हिंड्ने गर्नुभएको छ, त्यसो भन्न र गर्न अलि सुहाउँदैन, सुहाएको पनि छैन ।
सबैलाई थाहा हुनुपर्छ जुन घरमा हामी बसेका छौं, त्यो घर भत्काउँदै हिंड्नु शोभायमान र चेतनशिल प्राणीले गर्दैनन् । यदी कसैलाई आस्थानै छैन भने त्यो छाडेर जान कसैले रोक्न सक्दैन तर आस्था भएको मानिसले त्यो घरको खोईरो खन्न खोज्दैनन् ।
एउटा जीवीत संगठनमा मत मतान्तर हुन्छ, बिभिन्न खालका मतहरु आउँछन् । छलफल हुन्छ अनि टुङ्गिन्छ । हामीलाई लाग्छ समाजलाई यसोगरे समाजको बिकास हुन्छ तर बहुमतले हाम्रो बिचारलाई मान्यो वा मानेन भन्ने भन्दा विषय प्रमुख हुँदैन, पारित भएको बिचारलाई नै हामी सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आफ्ना विचारहरुलाई समय समयमा हुने भेला वा सम्मेलनहरुमा राखेर छलफल पछि टुंगो लगाउनु नै उपर्युक्त र चल्दै आएको विधि पद्धती हो । समाजिक र प्रकृया यहि नै हो । आफुलाई ठिक लागेको बिचार लागु भएन भने संगठनको नै खैरो खन्ने प्रकृयालाई कुनै हालतमा पनि सहि भनेर भन्न सकिंदैन । जनवादी केन्द्रीयताको पद्धति अनुसार समाजिक अनुशासन हुनै पर्छ । हामीले जुनसुकै संगठन बनाए पनि त्यो अनुसाशन बिना बलियो हुनसक्दैन । अनुशासन संगठनको रिढ हो । जनवादी केन्द्रीयतालाई फल्लो गरेर मात्र हामीले संगठनको बिकास गर्न सक्छौँ ।
आफुलाई लागेका तमाम बिचारलाई सम्बन्धित ठाउँमा छलफल गर्नु आफ्नो जनवादी अधिकार हो । हामीले सम्बन्धित ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्दछौं । केन्द्रीयता भनेको सम्बन्धित निकायले पारित गरेर कार्वान्वयनको लागि दिएको जिम्मालाई हामीले केन्द्रीयता भनेर जान्ने र पढ्ने पढाउने गर्दै आएका छौं । यहि संगठनको पद्धति हो । अनुशासन ः गोपनियता र जनवादी केन्द्रीयतामा उभिएको हुन्छ ।
हाम्रो संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज (तात्कालिन अखिल भारत नेपाली एकता समाज) को सन १९७९ देखि लगातार यहि पद्धति अनुसार अगाडि बढेर अहिले चारदसक पार गर्न सफल भएकोछ । यो द्वौरानमा कैयौँ पटक संगठानिक लोगोलाई आफुतिर तान्ने दुष्शाहस गरेता पनि उनीहरु सफल हुन सकेनन् । कुनै संगठनको लोगोलाई झण्डालाई, त्यसको मुखपत्रलाई यहाँसम्म रजिस्टेशसन समेतलाई खोस्न जति सजिलो हुन्छ । त्यो भन्दा धेरै अप्ठारो हुन्छ संगठनको प्रोपटीलाई जोगाएर राख्न । संगठनको सम्पत्ति भन्नाले आर्थिक मात्रै आउँदैन संगठनको अनुशासन पनि आउँछ । बिगतका कैयौँ साथिहरुले संगठनलाई जसरी तान्ने गरे वा संगठनबाट पतन भए पछि पनि क्षणिक रुपमा भए पनि संगठनलाई क्षत्ति पुराउने कार्यमा उद्दत रहे । अहिले पनि उस्तै प्रकारले साथिहरुले समान्तर संगठनलाई सञ्चालन गरेर त्यहि प्रकारको कामलाई दोहोराउने कोशिस गर्दै आउँनु भएकोछ ।
मैले यहाँहरुको एकता समाजमा योगदान छदैछैन भन्न खोजेको होईन । एकता समाजको बिकास गर्ने क्रममा सन १९७९ देखि यताजो जति कार्यकर्ता, नेताहरु संगठित भएर जो–जति दिनसम्म संगठनमा रहनुभयो उहाँहरु सबैको संगठनको बिकासमा योगदान छ । फुटेर गएका साथिहरुले पनि संगठनलाई आफु बस्दासम्म यहि अनुशासनको सिमाभित्र रहेर सहयोग गरेका थिए । ति सबै साथिहरुसँग हाम्रो साहनुभुति छ, तर कम्तिमा आफु बसेको घरलाई यसरी बद्नाम गरेर बस्न खोजेको जस्तो गर्नु आकाश तिर फर्केर थुक्न खोज्नु नै हो ।
पार्टी संगठनमा जसले जति योगदान दिनसक्छ, त्यो त्यहि बेलासम्मको लागि सम्मानीय हुन्छ । त्यसपछि कसैले संगठनलाई भत्काउन खोज्छ भने त्यो सहैय रहने कुरा हुँदैन । उहाँहरुले आफु बसेको बेला ठुलै काम गरेकै भय पनि अहिले उहाँहरुले संगठनको अनुशासनको बिपरित काम गर्दा हामीले उनीहरुको भण्डाफोरमा उत्रिनै पर्ने हुन्छ ।
संगठनको नीति नियम र पद्धतिले चलेका हुन्छन् । साथिहरु लामो समयसम्म संगठनको जिम्मेवारी पदहरुमा बसेर काम गरेका भएपनि संगठनको अनुशासनको बारेमा अञ्जान हुनुहुन्छ वा उहाँहरुले जानेर पनि नजानेको जस्तो गर्न खोज्नु भयो । जे भएपनि आफु बसेको घर कसैले पनि भत्काउन खोज्दैनन् । आखिर हामीहरुको लडाई के का लागि हो ? हामीले संघर्ष कोसँग गर्ने हो ? अहिले आफ्नै संगठनलाई नोक्शान पुराएर कसलाई फाईदा पुराउँन थाल्नु भयो ? यो सबै कुराको उत्तर उहाँहरुले खोज्नै पर्छ ।
अहिले हामी एउटै बर्गका एउटै सन्तानहरु आपसमा लडेर दुश्मनलाई खुसि पर्न थालेका छौँ । साथिहरु हामीले देश जोगाउँनका लागि सबैखाले देशभक्तहरुसँग एकता गरेर जानुको विकल्प आफ्नै संगठन र संगठनका नेतृत्वका विरद्ध दुषित हवा फैलाएर कसको सेवा गरिरहका छौं ? यतिवेला देशमा ईतिहासको सबैभन्दा अप्ठारो घुम्ति आएको बेलामा पनि हामी लडेर कसलाई तमासा देखाउँने कोशिस गर्दैछौं ? त्यो सबै कुरामा ध्यान केन्द्रित गरौँ । भित्रिया वैरिको भूमिकामा नलागौं ।
← मसालविरुद्ध भ्रम छर्न ओलीको झुटा लाञ्छनाको सिरानी !
चरित्र हत्या र गालीगलौज पत्रकारीता हुँदैन →
7 November 20206December 2020 Nepaliekta 0